भुवन केसीसँग के चाहन्छिन् सुस्मिता केसी, किन लेख्छिन् पटक पटक यस्तो स्टाटस ? « Ramailo छ
भुवन केसीसँग के चाहन्छिन् सुस्मिता केसी, किन लेख्छिन् पटक पटक यस्तो स्टाटस ?
अभिनेता भुवन केसी र अभिनेत्री सुस्मिता केसी बम्जन बिच बैवाहिक सम्बन्धमा पूर्णविराम लागेको लामै समय भैसक्यो । भुवन जिया केसीसँग लिभिङ टुगेदरमा छन् भने सुस्मिता पनि आफ्नै पारामा छन् । तरपनि भुवन र सुस्मिताको नाम बारम्बार जोडिइरहन्छ । दुई बिचको सम्बन्धलाई बाहिर ल्याउन भुवन भन्दा सुस्मिता अगाडी देखिएकी छिन् । यसमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक सजिलो बनिदिएको छ ।
सुस्मिताले एक साता अगाडी मात्रै पुर्व पति केसीलाई तथानाम गाली गर्दै फेसबुकमा स्टाटस पोस्ट गरेकी थिइन् । यिनै सुस्मिता जसले सोमबार राती मात्रै भुवनको सर्पोटमा अर्को स्टाटस फेसबुकमा पोस्ट गरेकी छिन् । नायिका पूजा शर्माले ‘भुवन र अनमोल भाग्यले चम्केको’ भनेर दिएको अन्र्तवार्ताको लिङ्क पोस्ट गर्दै सुस्मिताले भुवनको गुनगान गाएकी छिन् भने पूजालाई ‘चल्ला’ को संज्ञा दिदैं आक्रोश व्यक्त गरेकी छिन् ।
पुर्व भैसकेका पतिको बारेमा फेसबुकमा पटक पटक स्टाटस लेखेर सुस्मिता के प्रमाणित गर्न चाहान्छिन् ? भुवन केसीलाई उनी माया गर्छिन् या घृणा ? छानो छुट्टिएका पतिलाई माया र घृणा गर्नुको के अर्थ ? यसरी सामाजिक सञ्जालमा कोलाहाल गर्दा स्टार पुत्र अनमोल केसीलाई असर पुर्याउँछ भन्ने कुरामा सुस्मिता किन सचेत छैनन् ? सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस पोस्ट गर्नु पुर्व दुई पटक सोच्ने कि सुस्मिता जी ?